एनआरएनए युके आफ्नै निर्णय उल्ट्याउदै : ‘बोराका बोरा’ सदस्य बुझाउन पाइने ! | We Nepali
एनआरएनए युके आफ्नै निर्णय उल्ट्याउदै : ‘बोराका बोरा’ सदस्य बुझाउन पाइने !
२०७२ साउन १६ गते २०:५०
लण्डन । गैर आवासीय नेपाली संघ बेलायतले विगतको आफ्नै निर्णय उल्ट्याउदै सदस्य नवीकरण र नयाँ सदस्यका लागि एक व्यक्तिले जतिसुकै सदस्यको फारम बुझाउन सक्ने गरि ढोका खुला गरेको छ ।
एनआरएनए युके निर्वाचनमा विगतमा देखिएका विकृति रोक्न करिब दुई महिनाअघि आफैले गरेको निर्णयलाई शनिवार १ अगस्ट साउथ इस्ट लण्डनमा बसेको कार्यसमिति बैठकलेले उल्ट्याउदै ढोका खोलेको हो ।
विगतमा एनआरएनए युके अध्यक्षका प्रत्यासीहरुले निर्वाचनमा बोरामा हालेर सदस्य फारम ल्याई बुझाउने र हुलाक मार्फत पनि उम्मेदवारहरुले घरमै पुगि भोट खसाल्ने गर्नाले विकृति र विसंगति भित्रिएको ठहर गर्दै करिब दुई महिनाअघि रोक्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा एक जनाले बढीमा (परिवार र आफन्तसहित) १० जनासम्मको फारम बुझाउन सक्ने उल्लेख थियो । ‘वैकमा पैसा जम्मा गरेको रसिदसहित व्यक्तिगत रुपमा बुझाउने फारमको संख्या सीमित नराख्ने निर्णय कार्यसमितिले गरेको छ’, सचिव दासुराम पाण्डेले वीनेपालीसँग भने । ‘विगतमा पनि व्यालेटमा समस्या थियो’, सचिव पाण्डेले भने,‘सदस्यतामा कहिल्यै समस्या थिएन । त्यसैले विगतमा गरिएको गलत निर्णयलाई यो कार्यसमिति बैठकले सच्याएको छ ।’ यसअघिकै बैठकले पोस्टल भोटिङलाई भने खारेज गरिसकेको छ । एनआरएनए युकेका सदस्यहरुले यस पटक प्रत्यक्ष उपस्थित भएर मतदान गर्नुपर्नेछ ।
बैठकले सेप्टेम्बर १९ मा गर्ने भनिएको छैठौं अधिवेशनलाई सार्दै १२ सेप्टेम्बरमा गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । निर्वाचन समितिसँग सल्लाह गरेर अन्तिम निर्णय गरिने छ । निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव रामशरण सिखडाले जारी गरेको पे्रस विज्ञप्ती सँग बाझिने गरि शनिवार कार्यसमितिले निर्णय गरेको छ । यता, निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव सिंखडाले ‘निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने गरि केही प्रतिक्रिया नदिने’ बताए । कार्यसमितिको म्यान्डेट पाएर काम गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचनको मिति हेरफेर गर्ने र सदस्यता नवीकरण खुकुलो पार्ने काम महेन्द्र कंडेलको कार्य समितिले गरेको हो ।
कार्यसमितिले स्कटल्याण्ड,वेल्स्, नर्दन आयरल्याण्ड र इंगल्याण्डमा कम्तीमा एक, एक निर्वाचन बुथ राख्ने निर्णय गरेको छ । इंगल्याण्डको साउथ इस्ट लण्डनस्थित उलवीचमा निर्वाचन बुथ तोकिएको छ । त्यसबाहेक के गर्ने भन्ने बारेमा निर्वाचन समितिसँग छलफल गरि अघि बढने निर्णय गरेको सदस्य फडिन्द्र भट्टराईले बताए ।